Amasiko okuNgcwaba eChina kunye nokuCwangciswa
Ngelixa iindawo zesiNgcwabo zokungcwaba ziyahlukahluka ngokuxhomekeka apho umntu ofileyo kunye nentsapho yakhe bevela khona, ezinye izithethe ezisisiseko zisasebenza.
Umsebenzi wokulungelelanisa nokulungiselela umngcwabo waseTshayina uwa kubantwana okanye kulutsha olutsha. Inxalenye yomgaqo-nkqubo weConfucian wokuhlonela oonyana kunye nokuzinikela kwabazali bakhe. Amalungu entsapho kufuneka abonisane ne-Almanac yaseTshayina ukugqiba umhla olungcono wokubamba umngcwabo waseChina.
Amakhaya omngcwabo kunye neetempileni zendawo zenza uncedo lwentsapho lulungiselele umzimba kwaye luququzelele imimiselo yomngcwabo.
Izaziso zomngcwabo zithunyelwa ngefom yeimemo. Kwiimingcwabo ezininzi zaseTshayina, izimemo zimhlophe. Ukuba umntu uneminyaka engama-80 okanye ngaphezulu, izimemo zitshintshi. Ukuphila kude kube ngu-80 okanye ngaphesheya kuthathwa njengomdla wokubhiyozela kunye nabalilayo kufuneka bhiyozele ixesha elide lomntu kunokulila.
Isimemo siquka ulwazi malunga nomngcwabo, ixesha, kunye nendawo, kunye nesigqubuthelo esincinci esibandakanya ulwazi malunga nomfi ongabandakanya usuku lwakhe lokuzalwa, umhla wokufa, ubudala, amalungu omndeni awayephila kuwo kwaye ngamanye amaxesha indlela umntu wafa. Isimemo sinokuquka umthi wentsapho.
Ifowuni okanye umemele umntu angaphambi kwesi simemo sephepha. Ngayiphi indlela, kulindeleke i-RSVP. Ukuba isivakashi asikwazi ukuya emngcwabeni, iintyatyambo kunye nemvulophu emhlophe ngemali ngokuqhelekileyo isathunyelwa.
Iindwendwe kwiindawo zokungcwaba zaseTshayina zemibala ebomvu njengomnyama. Izambatho ezibomvu kunye ezimbala, ngokubomvu kufuneka ziphetshwe njengoko le mibala inxulumene nolonwabo. Imhlophe iyamkeleka kwaye, ukuba umfi u-80 okanye ngaphezulu, umhlophe ngepinki okanye obomvu uyamkeleka njengoko isiganeko sizathu sokubhiyozela.
Umntu oshonile unxibe iingubo ezimhlophe kunye neemvulophu ezimhlophe kunye nemali yamaphepha.
Kukho rhoqo ukuvuswa kwangaphambi komngcwabo kungadlulela iintsuku eziliqela. Amalungu omndeni kulindeleke ukuba agcine ubusuku obubodwa ubuncinane ubusuku obunomfanekiso womntu, iintyatyambo kunye namakhandlela afakwa emzimbeni kwaye intsapho ihlala ilinde.
Ngethuba lokuvuswa, iintsapho kunye nabahlobo bazisa iintyatyambo, eziyizambatho ezinzulu ezibandakanya amabhanti kunye nabanikazi ababhaliweyo kubo, kunye neengubo ezimhlophe ezizaliswe ngemali. Iintyatyambo zaseNtshonalanga zengcwaba zimhlophe.
Iimvulophu ezimhlophe zifana neemvulophu ezibomvu ezinikezwa emishadweni . Umhlophe ngumbala ogcinwe ngokufa kwisiChina. Isixa semali esabekwe kwimvulophu siyahluka kuye kuxhomekeke kulwalamano lomfi kodwa kufuneka libe ngamanani anqabileyo. Imali isetyenziselwe ukunceda intsapho ihlawule umngcwabo. Ukuba umntu oshonile wayeqeshwe, inkampani yakhe ilindeleke ukuba ithumele intambo enkulu yeentyantyambo kunye negalelo lemali elikhulu.
Ngomngcwabo, intsapho iya kutshisa iphepha le-joss (okanye iphepheni lomoya) ukuqinisekisa ukuba umthandayo unalo uhambo olukhuselekileyo ukuya kwi-world. Imali yamaphepha ephambili kunye nezinto ezincinane ezifana neemoto, izindlu kunye neethelevishini zitshiswa.
Ngamanye amaxesha izinto zidibanisa neemfuno zomthandayo kwaye zikholelwa ukuba zilandele emva kokufa. Ngale ndlela banakho konke abayidingayo xa bengena kwihlabathi lehlabathi.
I-eulogy inokunikwa kwaye, ukuba umntu unqulo, imithandazo ingathiwa.
Intsapho iza kubela kwiindwendwe ezibomvu zikhupha ngeengqekembe ngaphakathi ukuze ziqinisekise ukuba zibuyela ekhaya ngokukhuselekileyo. Intsapho inokunika iindwendwe i-candy ekufuneka ichithe ngaloo mini nangaphambi kokuya ekhaya. Ithekethi iya kunikwa kwakhona. Imvulophu nge-salivere, i-sweet, kunye nekhwakhithi akufanele ithathwe ekhaya.
Enye into yokugqibela, ingqungquthela yomlobo obomvu, inokwenziwa. Imicu ebomvu imele ithathwe ekhaya kwaye iboshwe kwiintlanganiso zangaphambili zendlu yeendwendwe zokugcina imimoya emibi.
Emva komngcwabo, umngcwabo wokungcwaba ukuya emangcwabeni okanye kwindawo yokuqumba.
Ibhendi eliqashiweyo elifana nebhinqa elihambayo ngokuqhelekileyo liholele umgca kunye nokudlala umculo omkhulu ukuze uthuthuke kunye nemimoya.
Intsapho inxiba iingubo zokulila kwaye ihamba emva kweqela. Ukulandela intsapho i-hearse okanye i-sedan equkethe ibhokisi. Ngokuqhelekileyo ihlotshiswe ngophawu olukhulu lomntu oshonile elenga kwi-windshield. Abahlobo kunye nabalingani bazalise umgca.
Ubungakanani bendwendwe buxhomekeke kubutyebi bomfi kunye nentsapho yakhe. Oonyana neentombi banxiba iimpahla zokulila ezimnyama kunye ezimhlophe kwaye bahamba emgceni ongaphambili. Abazazana bafika ngokuzayo kwaye banxiba iimpahla ezimnyama kunye ezimhlophe. Abazukulu kunye nabazukulwana babo banxiba iimpahla zokulila. Abalili bezakhono abahlawulelwa ukulila nokukhala bavame ukuqeshwa ukuba bazalise umgca.
Ngokuxhomekeke ekukhethweni kwabo, isiTshayina singcwatywa okanye sitshiswa. Okona ubuncinci, iintsapho zivakatyelela emangcwabeni kwiQing Ming okanye kwiTomb Sweeping Festival .
Abaxhamli baya kunxiba ibhinti kwibhande zabo ukuze babonise ukuba basesikhathini sokulila. Ukuba umntu oshonile ngumntu, ibhanti iya kwi-sleeve yangasese. Ukuba umntu oshonile ngumfazi, ibhinti ikhonjiweyo kumkhono wesokunene. Ibhendi yokulila igugile ixesha lokulila elinokugcina iintsuku ezingama-49 ukuya kwii-100. Abaxhamli banxiba iimpahla ezingapheliyo. Izambatho ezibomvu kunye ezimbala ziphephe ngexesha lokulila.
Oko Ukwazi Ngezipho Zomtshato zaseShayina
Uthini u-Massage Gua Sha?
Uthotho lweeKholeji zaseKhorensi
IsiPaganism saseYiputa - I-Kemetic Reconstruction